Other Dictionary | Danya Wadi
ဘီဘီစီ သတင်းထောက် Jonathan Head က မောင်းတောမြို့မှာ ဘယ်လို မြင်ခဲ့သလဲ (Video)
By danyawadi May 2, 2015 Leaveacomment
The aim of this dictionary is to make english easy both for experts and beginners. This Dictionary includes almost all the existing english vocabulary. We update this dictionary on daily basis even if you are not able to find any word typed in the search box, our database will save that word and it will […]
အကြမ်းဖက်မှုကိုအဆုံးသတ်ပြီးပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ် လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်မည်
By danyawadi July 10, 2013 Leaveacomment
ဇူလိုင်လ (၈)ရက်နေ့ကြေးမုံ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာ 87newsk You might also like:
English to Urdu | Urdu to English
By danyawadi April 21, 2013 Leaveacomment
http://dictionary.onepakistan.com.pk/ Home News اردو خبریں Business Cricket Showbiz Lifestyle Pictures Videos Blog Forum Weather Dictionary Urdu Dictionary | English to Urdu | Urdu to English Dictionary | اُردو انگریزی لُغت Free Urdu Dictionary Online offering English to Urdu Dictionary, Urdu to English Dictionary with Roman Urdu. Search the dictionary using the search tabs below, […]
Urdu to English Dictionary အူရဒူစာလုံးရေးသားခြင်း ဥပမာ باپ ကိုရေးသား၍ Father အဓိပ္ပါယ်ပြန်သည်။ http://www.urdutoenglishdictionary.pk/?urdu=%D8%A8%D8%A7%D9%BE&meaning=english Urdu to English Dictionary : اپنا مطلوبہ لفظ یہاں لکھیں English to Urdu Dictionary Urdu Word باپ Meaning in English Father Urdu to English Dictionary is designed keeping in mind the needs of Urdu speaking people who want to learn english and often want […]
ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာစကား၏ ၄၀% မှာ အင်္ဂလိပ်နှင့် ပါဋ္ဌိလိုဖြစ်……….
By danyawadi January 4, 2013 1 Comment
ရို ဟင်ဂျာ ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာစကား၏ ၄၀% မှာ အင်္ဂလိပ်နှင့် ပါဋ္ဌိလိုဖြစ်………. ယနေ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုသည်မှာ ဘာလဲ ဆိုသည့်မေးခွန်းများစွာရှိနေသည် ။ ကျွန်တော့် အဖြေကတော့ ရှင်း၏ ။ ရိုဟင်ဂျာ စကားကို ဒိုင်းနက် ၊ မာရမကြီး ၊ ကမန် နှင့် ရခိုင်လူမျိုးများလည်းပြောသည်ပင် ။ ရိုဟင်ဂျာ စကားကို အများဆုံးပြောသူများမှာ ဒိုင်းနက်နှင့်မာရမကြီး လူမျိုးများပင်ဖြစ်သည် ။ ထို့ကြောင့် ရိုဟင်ဂျာသည် ဘင်္ဂလီ မဟုတ်ပါ ။ ဘင်္ဂလီ စကားနှင့် ရိုဟင်ဂျာ စကား၏ ကွာခြားချက်မှာ ၇၀% ရှိသည် ။ ရိုဟင်ဂျာ စကားသည် ဘင်္ဂလီ ၊ အာရပ် ၊ အိန္ဒိယ ၊ အင်္ဂလိပ် […]